> Resource > Android > diro loona helo fariimaha qoraalka Android ka Computer Si fudud
Farriimaha qoraalka, sidoo kale loo yaqaan SMS, waa hadalka kooban lagu sheekeysto u dhaxeeya waalidka, asxaabta, asxaabtaada iyo aad. Waxay u qoraan kuwa tiimbashada xumaanta yar ee nolol maalmeedka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay telefoonka ah Android iyo qoraalka badan, waxaa laga yaabaa inaad dareento wax yar ka xumaaday. Waxaa dhab ahaantii xanibayo in qoraal fariin, gaar ahaan on a screen yar Android. Taa ka sii daran, aayadaha ku Android phone soo baxday in ay aad u gaabis ah.
Gaartay badan oo ku saabsan qoraalka in? Waa hagaag, aad runtii ma aha in ay u dulqaadan in. Halkii, waxaad ku diri kartaa iyo fariimaha qoraalka ah ka computer la keyboard ah. Hadda, ku Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) kuu ogolaanaysaa inaad sameeyo. Tani Tababaraha Android boosaska badan ku siinayaa awood u leeyahay inuu fariin qoraaleed u diray qof ama dad badan oo si fudud. Intaa waxaa dheer, marka aad hesho taleefan la rabin, tababaraha this Android ogolaan doonaa in aad sidoo kale gacanta ama gacanta ka saaray oo jawaab farriin qoraal ah. Ma qabow? Qaybta soo socda la doonayo in uu ku tuso tallaabo-tallaabo-hanuunka. Waxaa Fiiri.
Tallaabooyinka iyo Screenshot waxaa laga qaadaa marka aad isticmaasho version Windows ah. Haddii aad isticmaalayso version Mac ah, waxaad weli qaadan kartaa tallaabooyinka la mid ah si ay u muujiyaan sida loo diro loona helo qoraalka kombiyuutarka.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay kombiyuutarka
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan Wondershare MobileGo for Android ee kombiyuutarka. Bareesada in USB ah cable Apple in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay kombiyuutarka, ama waxaad isku dayi kartaa xidhiidh WiFi. Marka la ogaado, telefoonka aad Android xogta ay la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose ee tababaraha Android.
Si aad u samayso xiriir WiFi, waa in aad hubiso in aad ku rakibtay app MobileGo telefoonka aad Android. Haddii aan, fadlan kala soo bixi iyo rakibi app MobilGo halkan .
Tallaabada 2. Send iyo qoraallada ka computer ka heli
Tababaraha Android ayaa soo bandhigaan macluumaadka telefoonka Android aad baddeshay safka bidix. Tag SMS oo aad aragtaan threads oo dhan farriimaha ka soo muuqanayaan guddi saxda ah. Riix New iyo wada hadal ah ka soo bixi. Edit content ee fariinta. Markaas, guji karoos buluug ah xaq ah wada hadal ah.
Wada hadal kale oo booda, kaas oo dhan xiriir telefoonka aad Android ku qoran yihiin. Fiiri sanduuqka hor xiriirada aad ku socoto in aan fariin u dirno. Markaas, riix OK .
Marka fariin uu diyaar u yahay, guji dir. farriimo ayaa loo diri doonaa dadka aad rabto in aad hesho. Marka uu qof ku siinayaa jawaab, tababaraha Android idin ​​xusuusin doonaa wada hadal ah oo ku saabsan geeska hoose ee midig ee shaashada kombiyuutarka. Riix wada hadal, oo waxaad ku edit karaa fariin cusub oo a reply sameeyo.
Maxay ku saabsan telefoonka wacaya marka la isticmaalayo Tababaraha Android ah? Sidoo kale, wada hadal ah oo u muuqata, idiin siinayo inaad laba fursadood. Mid ka mid ah waa Hoos u dhaca. Reply la gaadhsiin. kalena waa Hoos u dhaca . Samee doorasho sida ay xaaladdaada u gaar ah.
Waana habka kaliya ee sida loo diro loona helo fariimaha qoraalka ah ka computer. Sahlan oo wanaagsan, miyaanay ahayn? Waa maxay sababta aan kala soo bixi oo isku day tababaraha Android on wixiinna?
Sida loo Beddelaan regelingen in MP3 u Google Music